11 May, 2018 - 00:05	 2018-05-10T16:12:18+00:00 2018-05-11T00:01:55+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 40. Ndiri kutsvaga mudzimai wekuroora ari pachokwadi ane makore 30 kusvika pa37. Handisi pamushonga. Munondibata pa0775 979 812.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 29, ndiri kutsvagawo murume ane makore 35 kusvika 40. Ndine vana vaviri, ndiri HIV negative. Ndinoda murume ari pachokwadi, nhare yangu 0773 189 070.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40 ndotsvaka mukadzi ane makore 26-35 asiri pachirongwa. Ndine mwana mumwe chete, ndoshanda. Zvizhinji tozotaura pa0718 366 741.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana 1 ndotsvagawo murume wekuroorana naye ari pachokwadi. Nhare yangu 0783 238 530.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndiri kudawo musikana anonamata ane makore 18 kusvika 21 ari pachokwadi. Asina chirwere ngaandibate pa0716 065 996.
Makadii? Ndotsvagawo murume ari pachokwadii wokugara naye asi vanoda kutamba kwete musafone henyu. Ndine makore 35 nevana vatatu, ndiri pamushonga. Ndobatika pa0715 105 934.
Ini ndiri musikana akarambwa nemukomana ndine nhumbu saka ndotsvagawo murume ane mwana wake 1 ane makore 20 – 29. Ini ndine makore 20, ndapota buditsaiwo tsamba yangu. Vanoda ndibatei pa0734 136 083.
Ndiri murume ane makore 28, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 25 zvichidzika Nhare yangu 0777 131 848.
Ndoti pachipamwe. Ndanzwa nekunyorera asi ndisingashambadzwe. Ndine makore 40 ndodawo shamwarikadzi ine makore 35 – 45. Ndiri muHarare, nhare yangu 0735 363 550.
Kwayedza mwenje wedu. Ndinotenda nechino chirongwa. Ndiri murume ane makore 48 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Nhare yangu 0776 810 993.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 30, HIV+ uye ndinoda musikana kana mukadzi ane mwana mumwe chete ane makore 20 – 28. Ngaave anonamata achigara muHarare chete, ndinoda anoshanda kana cross-border. Ari serious ave kuda zvemba anondibata pa0772 761 114.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 23 ari mutsvuku asiri pamushonga. Anoda anondibata pa0776 044 705.
Makadii? Ndinotenda nechirongwa chedu. Ndakamuwana wandaida saka vose vaifona pa0776 166 475 chiregai henyu. Ndatenda.
Ndiri murume ane makore 28 nemwana 1, ndinotsvaka mukadzi wekuroora ane mwana 1 kana asina ane makore 25 – 19. Akavimbika anofona pa0736 145 815.
Makadii veKwayedza? Makaita basa ndakamuwana wandaida saka vamwe chiregai kufona pa0718 900 479.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23 ndotsvagawo musikana ane makore 18-22. Kana pane andifarirawo ngaandibate 0773 852 607.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana mutsvuku mutete akanaka, ndinotsvakawo shamwari yekufambidzana nayo. Ndine makore 19, ndakambonyorera asi handisati ndamuwana wandiri kuda. Nhare yangu 0772 637 970.
Ndiri kutsvaga musikana ari HIV+, kunyanya kubva pakuzvarwa seni, ane makore 20-24. Ini ndine makore 26 ndiri kupedzisa zvidzidzo zveuniversity. Nhamba dzangu 0734 867 754.
Ndiri murume ane makore 37, ndiri kutsvaga mukadzi wekugara naye anoshanda kana anozviitira. Ini ndogara muHarare, ndakanaka. Ndiri mukaradhi ari pakatati nepakati, nhare yangu 0771 193 408.
Ndiri murume ane makore 34, ndinobva kuMasvingo uye ndinodawo mukadzi kana musikana asingasvoreki. Anondida ngaandibate pa0779 565 614 kana kutumira masms.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 43, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume ari pamushonga. Ngaave anoshanda ane makore ari pamusoro peangu anoda zvemba. Mwana ndine 1, nhare yangu 0713 560 626.
Ndiri mukadzi ane makore 38 ndodawo murume ane makore 45 zvichikwira anonzwisisa, anonamata uye rudo rwechokwadi. Matsotsi chimbomirai, nhare yangu 0779 411 957.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa, ndine mwana 1 uye ndiri HIV positive. Ndiri kutsvagawo murume ari positive seni ane makore 40. Nhare yangu 0738 083 076.
Mukaverenga tsamba yangu ndingafarewo. Ndiri mudzimai ane makore 35 nevana vatatu. Ndotsvagawo murume ari pachokwadi chero ari pamushonga, ini handiratidze kurwara uye ndakasimba. Andifarira ndobatika paApp kana kufona chero nguva. Nhare yangu 0715 105 934.
Makadii? Ndiri murume ane makore 44, handisati ndamboroora. Ndinotsvaga mukadzi wekuroora asina mwana. Nhare yangu 0778 932 902.
Ndiri murume ane makore 50 nevana 3 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Andifarirawo ndibate pa0777 517 805.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 32, ndotsagawo mukadzi wekuwadzana naye. Nhare dzangu 0782 910 017.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2. Ndinodawo murume akarongeka anoda zvemusha asinganetse. Nhare yangu 0782 099 403.
Ndiri murume ane makore 31, ndinodawo mukadzi wekuwana ari kuda zvemba. Ndine mwana 1, andida totaura pa0772 233 783, ndatambura. Kana paApp ndiripo, ndatenda.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinodawo shamwari yechisikana ari pachokwadi. Ada nhamba dzangu 0715 387 252.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 20 asingapinduri maya, gara warega asiwo kwete mambuya. Nhamba dzangu 0774 273 029.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 18-21. Ari pachokwadi, kunyanya anogara muguta reHarare ngaandibate pa0779 067 294.
Makadini veTishamwaridzane? Ndine makore 33, ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane makore 20 kusvika 28 wekuroora asina chirwere. Nhare yangu 0771 412 657.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Andifarira ndibate pa0718 723 326.
Makadii hama vadikani? Ndiri musikana ane makore 23, ndinotsvagawo murume ane makore 25 kusvika 30 anoda zveimba anonamata. Andifarira ngaaise sms pa0774 872 244.
Makasimba here veKwayedza? Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 39. Nhare yangu 0785 708 476.
Ini ndiri murume ane makore 36 ndakamboroora uye ndine vana saka ndiri kudawo mukadzi asina vana kana ane vana vasingapfuure 3, asina chirwere. Ndiri muHarare, nhare yangu 0777 101 148.
Makadii veKwayedza? Ndine Makore 44, ndiri pamushonga uye ndinodawo murume ane makore 50 zvichienda mberi. Zvizhinji tozotaura, anoda ngaandibate pa0736 180 909.
Ndiri musikana ane makore 18, ndinotsvakawo mukomana ane makore 20 kusvika 25 anoda zvekuroora. Nhare yangu 0776 540 022.
Ndiri mukadzi ane makore 45, ndiri kutsvaga murume ane makore akadarika angu. Ndine mwana mumwe chete uye ndinoshanda saka iye ngaave anoshandawo. Anoda ngaandibate pa0737 308 140.
Ndiri murume ane makore 29 nemwana 1. Ndinotsvagawo musikana ane makore 19 kusvika 27 anoshanda uye anoda kuroorwa. Nhare yangu 0784 293 977.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera asi ndakasangana nevanoda mari. Ndiri murume ane makore 43 ndoda mukadzi anoda zvemba ane makore 36 kusvika 43. Nhare yangu 0713 320 265.
Kune vose vachiri kufona pa0718 527 231 ndakawana wandaida saka ngavachirega havo.
Makadini veKwayedza? Ndinotvagawo musikana wekuroora ari pamushonga. Ari pachokwadi ndibate pa0733 638 242.
Ndiri murume ane makore 33, ndinodawo mukadzi wekuroora. Anoda anondibata pa0784 802 820.
Makadi veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35. Ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 30 kusvika 23. Ndine mwana 1, anoda ngaafone pa0737 945 547.